Previous Article Chineke, ụmụ Gị, ụmụ Igbo nọkwa Gị n’aka
Next Article Uwa nke a sefu!
Adịghị n’otu abịghị ihe dị sọsọ n’etiti NdịIgbo.ọbụ ihe bidoro Ụwa t’ụwa. Ihe nke ndị Igbo jiri dị iche bụna anyị bụndị emewuru emewu site na mkpọchapụ ndị ugwu kpọchapụrụ anyị n’obodo ha tupu anụọ ọgụ anyị na ha lụrụ nahọ/afọ 1967 rue 1970, site na ngụchapụ ana agụchapụ anyị ime ka ọnụ ọgụ anyị pee mpe nke, ikenye anyị oke ise ma ndị ọzọ ketara oke isii, na nkewasị ekewasịrị anyị na umu nne anyị ndị mba mmiri na ekweghị na onye Igbo gachị Naịjirịa mgbe ọpụtara nan dị Igbo kacha mma.
Ndị okenye sịna agbịsị gbaa nwata ọmụrụ akọ. Ihe nile ndịa mere ma n’emerịrị anyị bụ agbịsị n’agba anyị. Ajụjụ bụrụzie, anyị bụ ndị Igbo amụrụgo akọ? Ole mgbe anyị geji mụrụ nyabụ akọ?
Ọbụ ya mere na, adịghị n’otu ndị Igbo dịka ọbụ anyị ka ọkacha. Ihe mmegbu nile neme anyị tata mekwara obodo anakpọ Japanị mgbe ụwa nile kpọrọ ha asị/ọnụ site nọ ọgụ ụwa nke abụa anụrụ mgbe tere aka. Nyabụ agbịsị gbara Japanị mere ka ha nile jikọta aka ọnụ dị n’otu. Ihe izizi Japanị mere bụ na ha siri ụmụ ha nile nọ na obodo ndị ọcha dị iche iche lọta bịa were ọnọdụ na Japnị, ka ha jikọta aka were mee ka obodo gaa n’ihu. Ha nyere ndịa nile lọtara ihe ọbụna ha chọrọ k’obi dị ha mma ịlụrụ obodo Ọlụ. Nnabataa nke a juru ndị a jepuru ejepu afọ nke uku kpatara na ha ji obi ọcha ma enebeghị ihe ha gerịta rụbara obodo Japanị ọlụ. Ndị bii ebi nyekwaraa ndịa ezigbo nkwado pụrụ iche, n’enweghị anya ukwu. Ọbụ ya mere na taa, Japanị n’agba izizi n’ihe gbasara ịrụ ụgbọ ala, ihe igwe ọbụna eji emee ka ndụ dị mma obibi, ngwa ọlụ nile ndị ọka mmụta ji alụ ọlụ n’ụlọ ọgwụ ma ebe ana’alụ ọlụ aka. Ndị be anyị, ọbụ onye n’agba mbọ ka Chineke na anọnyere. Ọbụghị sọsọ ikpe ekpere ụtụtụ, ehihie, n’abalị. Chineke abụghị Chineke n’anụ ekpere mgbe anyị adịghị agba mbọ na n’emekwa ihe ọchọrọ. K’anyị nebakwa anya na umunne anyị bụ ndị Izrel. Ụwa bụrụ ha ọnụ ma kpọkwa ha asị kpatara na ebe Pharaoh na Eze Herod kwụsịrị ka ụmụ Mohammed bidoro gaba were rue tata. Eze Hitila jiri anwụrụ ọkụ n’egbu egbu kpochapụ imirikiti umunne anyi ndịa na obodo Jamịnị maka anya ụfụ ọganịrụ ndị Izrel. Ihe a bụkwa ihe mere anyị na ugwu awụsa na 1966-1967.Nke a mere ụmụ Izrel jikọtara aka ọnụ nihe nile ha na eme, mere ha jiri bụrụ otu nime obodo sikarịchara n’ike n’ụwa nile. Ha anaghị anara ikike onye ọzọ ma ha chọ ime ihe. Chineke sitere n’ututu nọnyere ha makana ha n’agba mbọ dị egwu.Unu ahụna na Chineke anaghị arapụ ndị Ya n’agba mbọ ma nwee okwukwe na Ya aka. Nke a bụ ihe mmụta.
Tupu anyị adị n’otu ka ndị Japanị na Isrel, anyị ga achọpụtagodụ ihe ndị n’eme ka anyị n’agbasasị agbasasị ka atụrụ n’enweghị onye na azụ ha. Ihe ndị mụ cheputara ugbua bu:
Anyị n’agba mbọ anụ mara ọwa ya ma chefuo ọganiru ọha,onye na nke ya onye na nke ya. Onwe mụ diri mụ mma, achọkwaghị mụ ịma maka onye ọzọ. N’ala Igbo taa, ụmụ anyị nọ nebe dị iche iche n’eme ọfụma karịchaa ndị anyị nọ na be ha. Anyị na emekarị mkpọtụ ịnya isi ego. Omume dị etua dịkwa nọ obodo oyibo ebe ndị Igbo nọ neme ka ndị ọcha n’enyocha anyị oke nyocha.
Anyị aghọtaghị Chineke anyị n’efe.Ekpere anyị anaghị eru Chineke ntị maka na anyị anaghị eme ihe kwesiri ime dịka ịgba mbọ na ibii ndụ ụmụ Chineke kwesiri ka ha n’ebi site na idobe iwu ya nile.
Anyị amaghị ahọpụta ezigbo ndị ndụ anyị, kpatara na ndị amaghị ọchịchị n’ezu ego ekwesiri iji rụpụtara obodo ọlụ. Ha n’ewere onwe ha ka chukwu, were npakọ n’emegbu ndị ogbenwe na ụmụ nwanyị. Ha n’echefu na onye ọchịchị abụghị ya n’anọ n’isi oche. Ha chefuru na Jizọsụ Kraist/Jeso Chriti bụ onye isi kachasị ndị isi nile weturu onwe ya n’ala were rụa ihe nile Chineke zitere ya ka ọrụa n’ụwa. Jisọsụ bụ Eze kachasị Eze enweghị mgbe ojiri mpakọ chịa ọchịchị. Ọbụkwaghị ndị ma ihe n’achị. Ọbụ sọsọ ndị ji ego. Nke a mere na ọbụ sọ ndị nwere ego ka ụmụ anyị n’enomi. Onye ose foto anakwaghị esegị foto maka na ịdịghị ka onye ji ego ma ọbụ onye amara ama.
Anaghị egekwa olu ndị ana achịchị ,ma ọbụ mee ihe ha chọrọ. Imirikiti ụgbọ ala abụghị ihe ndị g’enye ụmụ ogbenye mmiri, ọkụ, okpolo ụzọ na ezigbo ụlọ ọgwụ. Ndị na chị achị n’eme ihe otu osiri masị ha. Mgbe ọha sịrị na ha achọkwaghị ịsụ asụsụ ọzọ ma ọbụghị Igbo n’ọgbakọ Ndị Igbo, ndị isi kwesiri ime otu ahụ n’enweghị mgbaghasị.
Anyị anaghị akpọkụ otu nile di iche iche mgbe anyị neme nzukọ, m’ọbụ kọwara ọha n’eze ihe anyị neme ka onye ọbụna mara ebe anyị na eje.Otu karịrị akarị maka na onye ọbụna chọrọ ịbụ onye isi. Azọ ọchịchị, onye ọdabaghịrị agbakapụ nwee otu nke ya, kama ọga ejikọ aka onye ahọpụtara ka ihe gaa nke ọma, m’ọbụ chere mgbe ọzọ ka ọzọ kwa ọzọ.
Ndị ọchịchị eburule ndọrọ ndọrọ bubata n’ime ụlọ Ụka na n’ime Obi ndị Eze na Igwe kpatara na ọgbaghara dị n’ ime obodo ọbụna. Ndị Eze na Igwe hapụ inekọta obodo ha anya, ha agbara gaa na nke ndị ndọrọ ndọrọ ikete oke nke ha. Ọtụtụ n’ime ha n’achọkwa oke ụmụ na nwunye ha, ndị n’enweghị ike ịchọta ọlụ na ike aka ha.
Ịhụ onwe anyị n’anya g’ame ka anyị bulie onye nke anyị elu mgbe ọna eme ọfụma ma nyekwara onwe anyị aka mgbe anyị nọ n’mpka. Anya ụfụ kpatara na abalị dị egwu na ịtọ ntọ abụrụ na aka ọlụ ndị anya ọkụ na ndị enweghị aka ọlụ.
Ahụ ihe ọjọ, ma sị ekwuna. Nke a bụ ihe gbasara ndị okenye anyị. Ekwupụtaghị ihe ọjọ n’oge na eme ka ihe mebie. Unu mara na ihe mebie ọna ahịa ahụ ndozi. Ndị okenye anyị n’asọ anya nke ukuu so emebi ịdị n’otu Ndị Igbo.
Ọpụtara na anazịghị ebido n’ulo mara mma wee pụa ezi? Gịnị kpara ụmụ anyị jiri ego na akụ ha mepee cha obodo ndị ugwu na ndị ofe mmanụ mana beanyị atọgbọrọ chako? Ọ gịnị kpatara na anyị n’agbafusi agbafusi nke bụ na ana ewere onu ogu anyị tinyere ndị awụsa na ndị ofe mmanụ?
Oke nkewa nke osu na uka so ebute adịghị n’otu. Mgbe mmadụ Chukwu kere eke gụpụrụ mmadụ ibe ya, mepu kwa ya obi, nghọtahie abata, obi mmadụ aghasaa, aṅụrị agaghị adịkwa ịlụrụ obodo ọlụ n’obi ọcha.
Ịgụ akwụkwọ bara uru, mana anyị ga eme ka ụmụ anyị nwe ezigbo ụlọ akwụkwọ nke nne na nna ga akwunwu ụgwọ ya, ebe aga n’akụzi ihe ọma gbasara Ndị Igbo, asụsụ Igbo, na ịtụ egwu Chineke.
Asụsụ anyị mara mma, ogeme ka anyị n’ekwu otu olu. Sụba nụ Igbo bụ ezigbo ihe.
Ndị Igbo anọghị n’otu ndọrọ ndọrọ egwuregwu ọchịchị pụtara na ikwekọrịta n’otu ihe hịara ahụ. Kedu ka onye APGA, onye PDP, onye APC na onye Labor ga ekwekọrịta iwepụta otu onye Igbo ka ọzọọ ọchịchị obodo Naịjirịa n’aha Ndị Igbo? Kedu ka otu abụghị nke Ndị Igbo bụ ndị ahụghị anyị n’anya n’ekwu ihe neme ga esi weputa onye Igbo ka ọchịa Naịjirịa? Nwoke ọna amu nwa?
Ọbụrụ na ndị Chukwu nyere onyinye nkwuputa ga enye aka kwuputa ihe ndịa, Ndị Igbo ga agbanwe omume ha n’ụzọ kwesiri ekwesi.Anyị agaghị eru nyabụ ije n’isi n’otu ụbọchị, mana Chineke Ndị Igbo ga aza ekpere anyị. Mgbe n’eteghị anya, anyị ga enwe mmeri, anyị ga ahụ ihe anyị n’achọ n’uko elu n’uko ala.
Ka Chineke mezie okwu mụ!